फाइनलमा भारतसँग कहाँ चुक्यो नेपाल? | Nepal Khabar
फाइनलमा भारतसँग कहाँ चुक्यो नेपाल?
भारतले माल्दिभ्समा शनिबार राति सम्पन्न फाइनलमा नेपाललाई ३-० गोलअन्तरले पराजित गर्दै दक्षिण एसियाली फुटबल(साफ)च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्यो।
माल्दिभ्सको मालेस्थित नेशनल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल भारतसँग ३–० को गोल अन्तरले पराजित भयो।
पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरी गरेको नेपालले दोस्रो हाफमा नेपालले तीन गोल ब्यहोर्यो।
दोस्रो हाफको सुरुवातमै लगातार दुई गोल ब्यहोरेपछि दबाबमा आएको नेपालले केही राम्रो मुभ बनाएपनि भारतको रक्षापंक्ती तोड्न सकेन।
४८औं मिनेटमा भारतका कप्तान सुनिल क्षेत्रीले हेडर गोल गर्दै भारतलाई अग्रता दिलाए।
लगत्तै २ मिनेटपछि सुरेश सिंहले डी बक्सभित्रबाट गोल गर्दै भारतको अग्रता दोब्बर पारे।
यस्तै अतिरिक्त समयमा सहल अहमदले गोल गर्दै भारतको जित पक्का गरे।
प्रकाशित: October 16, 2021 | 22:56:58 असोज ३०, २०७८, शनिबार